nyeinchanaye81 | ငြိမ်းချမ်းအေး @ Nyein Chan Aye
Author Archives: nyeinchanaye81
ဟိုတရက်က စပါး နဲ့ ဘော်လ်တန် ကစားတဲ့ FA ဖလားဘောလုံးပွဲမှာ နှလုံးရပ်ပြီး လဲကျသွားတဲ့ ဘော်လ်တန် ကစားသမား မူအမ်ဘာ ကို ဖြစ်ဖြစ်ချင်း စပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက် အသက်ကယ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အဲဒီနေ့က အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ပြောပြတဲ့ အင်တာဗျူးတွေ ကြည့်ရတာ စိတ်နှလုံးကို ထိခိုက်စေသလို ကြည်နူးပီတိလည်း ဖြစ်စေတယ်။ လဲကျသွားတာကို စသတိထားမိသူက ဘော်လ်တန်အသင်းရဲ့ အရိုး၊ အကြောပညာရှင်(Physio)၊ သူက “ကွင်းထဲဝင်ဟေ့၊ ကွင်းထဲဝင်ကြဟေ့” ဆိုပြီး ကုန်းအော်တယ်။ ဘော်လ်တန် ဆရာဝန် နဲ့ … Continue reading →
Posted in Essay ရသစာတမ်းငယ်	| Tagged ဗမာ, မူအမ်ဘာ, ရသစာတမ်းငယ်, အက်ဆေး, အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယားလိဂ်, အားကစား, ဧရာဝတီ, ဘောလုံး, ဘော်လ်တန်, မြန်မာ, ငြိမ်းချမ်းအေး, နှလုံးရောဂါ, Bolton Wanderers, Burma, Burmese, English Premier League, EPL, Essay, FA Cup, Fabrice Muamba, Football, Heart Attack, Irrawaddy, Myanmar, Nyein Chan Aye, Sports	| 1 Comment
I would like to respond to comments by Ludu Sein Win and Dr. Than Htut Aung (CEO, Eleven Media Group) regarding Monday’s small protest to commemorate the fourth anniversary ofabrutal crackdown on the monk-led uprising (2007) in Burma. … Continue reading →
Posted in English	| Tagged Aung San Suu Kyi, တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ, ဒီမိုကရေစီ, ဗမာ, မဇ္ဈိမ, အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်, အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး, အကြမ်းမဖက်, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်, ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု, မြန်မာ, နိုင်ငံရေး, Burma, Democarcy, Democratization, Demonstration, Dialogue, Dr. Than Htut Aung, Eleven Media Group, EMG, Ethnics Conflicts, Journalist, Ludu Sein Win, Media, Mizzima, Myanmar, National League For Democracy, National Reconciliation, NLD, Non Violence, Non Violent, Peaceful, Politics, Protest, Reform	| 1 Comment
“Our lingua franca” – It was the word that came into my mind when I saw the news photo of Daw Aung San Suu Kyi’s attendingafootball match at the National Youth Stadium in Rangoon. I learned the word … Continue reading →
Posted in English	| Tagged Aung San Suu Kyi, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ, တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ, ဗမာ, အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်, အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး, အားကစား, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်, ဘောလုံး, မြန်မာ, နိုင်ငံရေး, Burma, Business Tycoon, Crony, Dialogue, Ethnics Conflicts, Football, Myanmar, National League For Democracy, National Reconciliation, NLD, Political Party, Politics, Sports	| 1 Comment
မှ/ ငြိမ်းချမ်းအေး (သာမန် ဗမာနိုင်ငံသား တဦး) ခေတ္တ – ဘရစ္စဘိန်းမြို့၊ ကွင်းစလန်းပြည်နယ်၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ။ ရက်စွဲ – ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်။ သို့/ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ အမှတ် (၉၇/ခ)၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အကြောင်းအရာ။ ။ ဗမာနိုင်ငံသားတဦးအနေနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သို့ တင်ပြချက်၊ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။ ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခင်ဗျား..။ ကျွန်တော် … Continue reading →
Posted in Letter ပေးစာ	| Tagged ကချင်, ဗမာ, အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်, အိတ်ဖွင့်ပေးစာ, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်, ပေးစာ, ပြည်တွင်းစစ်, မြန်မာ, နိုင်ငံရေး, နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား, Burma, Civil War, Daw Aung San Suu Kyi, Kachin, Letter, Myanmar, National League For Democracy, NLD, Open Letter, Political Party, Political Prisoner, Politics	|2Comments
ဦးဝင်းတင် (၁၉၃၀-) ဓာတ်ပုံ – လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေး ခရီးစဉ်မှာ ပါသွားတဲ့ ဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ခုတက်လာတဲ့ သတင်းတွေမှာ သိပ်မတွေ့ရဘူး။ ခုခေတ် မန္တလေး အနေနဲ့တော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဟိုးအရင်ကတော့ ဦးဝင်းတင်ကို မန္တလေးရဲ့ ထောက်ခံမှု၊ ချစ်ခင်မှုက တော်တော်ကြီးတယ်။ စာပေအသိုင်းအဝန်း၊ စာဖတ်သူ ပရိသတ် တင်မက လူထုမောင်နှံလို မြို့မိ၊ မြိုဖတွေနဲ့အတူ မန္တလေး လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရေးပါ၊ အရာရောက် ဝင်ဆန့်ပြီး လူထုချစ်ခင်မှု ရခဲ့တယ်။ ဦးဝင်းတင် နဲ့ … Continue reading →
Posted in Portrait ရုပ်ပုံလွှာ	| Tagged ဗမာ, မန္တလေး, ဝင်းတင်, ဟံသာဝတီ, အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်, ဦးဝင်းတင်, မြန်မာ, နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား, Burma, Hanthar Waddy, Myanmar, NLD, Pollitical Prisoner, U Win Tin, Win Tin	|2Comments